५ सय ८० इन्जिनियर खटाइए – Sourya Online
५ सय ८० इन्जिनियर खटाइए
सौर्य अनलाइन २०७२ माघ १९ गते १२:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । गत वैशाखपछि लगातार गएको भूकम्प क्षतिको लगत संकलन गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ५ सय ८० इन्जिनियर खटाएको छ । विभागले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा गएर स्थलगत तथ्यांक संकलन गर्न टोली खटाएको जनाएको छ । भूकम्पबाट बढी क्षति भएका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ती जिल्लाको लगत संकलन गर्न संकलक पठाइसकेको विभागले जनाएको छ । संकलित तथ्यांकका आधारमा प्रत्येक आवासीय घरको क्षतिको विस्तृत आंकलन भई वास्तविक पीडितको पहिचान हुने र यसले पुनःनिर्माण कार्यक्रम शीघ्र सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले पहिलो चरणमा दोलखामा १ सय ३० र दोस्रो चरणमा उपत्यका बाहिरका अन्य जिल्लामा ४ सय ५० जना लगत संकलनकर्ता पठाएर काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको प्राप्त विवरणबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ । यही साताभित्र ४ सय ५० जना इन्जिनियर प्रभावित जिल्लामा खटिँदै छ ।
उनले भने, ‘लगत संकलनका लागि ४ सय ५० जनालाई तालिम सुरु गरिएको छ । ५ दिनको तालिमपछि सबैलाई प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन लागिएको छ ।’ यस सर्भेक्षणमा विज्ञ सर्भेयरले ‘ट्याब्लेट’ प्रयोग गरी संकलन गरेको तथ्यांक इन्टरनेटमार्पmत सोझै सिंहदरबारस्थित सरकारी एकीकृत तथ्यांक केन्द्रमा र विभागको सर्भरमा प्राप्त हुनेछ । (सौस)
फिदिममा सवारी दुर्घटनाहुँदा एकको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते
आइसियुमा जनशक्ति अभाव
प्लाज्मा आदानप्रदानका लागि एप्स सञ्चालन
११ प्रतिशले लागुुऔषध प्रयोगकर्ता बढ्दै
सुनको मूल्य प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढ्यो
पाटन दरबार संग्रहालयमा चहलपहल बढ्यो
बन्द विद्यालयको ढोका कहिले खुल्ला ?
जहाँ सयौँ मानिसलाई मारेर कुवामा फालियो